Company Profile - China WEICHENG METAL VOKATRA CO., LTD
Auto faritra hafa
Wayscan Metal Products Co., Ltd / Weicheng Metal Products Co., Ltd, tany am-boalohany ho Ninghai atao hoe Jinmi Izay indrindra milina Factory, dia naorina tamin'ny 1991 tao Ningbo, ary Nizara roa Business Units: Mandatsaka amin'ny departemantan'i sy Autoparts Sampan-draharahan'ny. Mandatsaka ny Departemanta manokana amin'ny famokarana karbaona vy, firaka vy, Stainless vy, ductile vy sy ny karazana fampiasam-bola sy ny fasika castings castings. Autoparts Sampan-draharahan'ny dia mandroso mifototra amin'ny ny castings sy machining hatramin'ny taona 2009, nifantoka tamin'ny mamily Knuckle sy ny hafa mifandray amin'ny castings autoparts. Taorian'ny taona maro ny fampandrosoana, ny mamily Knuckle handrakotra mihoatra noho ny fiara an'arivony karazana modely. anisan'izany ny andian-Audi, Fiat, Hyundai, Opel, Peugeot, Renault SKODA, seza sy VOLKSVAGEN.
Amin'izao fotoana izao ny orinasa mampiasa olona 500, anisan'izany ny injeniera sy ny ara-teknika mpiasa mihoatra ny 30. Ny orinasa mitana 60.000 metatra toradroa, fanorenana faritra 40.000 metatra toradroa. Ankehitriny dia manome silica-Sol fanariana ny fampiasam-bola, ny rano fitaratra fanariana ny fampiasam-bola, fanariana sy machining fasika, amin'ny feno asa isan-karazany ny Product nanaovany, bobongolo Ny fanaovantsika, nanarato, Heattreatment, tena toetrany fitsaboana, Machining, mivory, ary ny fonosana. Ny orinasa dia izao isan-taona Output ny mihoatra ny 15.000 taonina castings ary ny 1million pcs ny misintona Knuckles. Nanizingizina ny finoana ny kalitao, ny orinasa dia fitaovana amin'ny Miovaova arakaraka ny kalitao fisafoana trano, includingSpectrometer, hamafin Tester, Metalloscope, Tensile Tester, -60 ℃ Impact Tester, andriamby Detector, Ultrasonic Detector, Salt tenan'ny Tester, Automatic CMM, fandefasana, Roundness Mpamantatra, fahombiazana Tester sy Coutourgraph, vokatra rehetra dia mafy fitiliana mba hahazoana antoka fa mahafeno fepetra.
Ny orinasa no misy ao amin'ny firenena Ninghai, Ningbo City, Zhejiang Province, afa-tsy avy amin'ny Ninghai 2KMS fivoahana ny lalambe, ary ny 90 km avy eo amin'ny seranan-tsambo Beilun, 60KMS avy any Ningbo seranam-piaramanidina iraisam-pirenena. Noho ny fahitana ny orinasa "Aoka ny World-Class Metal Parts Supplier!" Tonga soa eto mpanjifa Wayscan amim-pitiavana avy amin'ny manerana izao tontolo izao ho lavitra ezaka fanorenana namana fandraharahana fiaraha-miasa miaraka aminay!
WAYSCAN METAL VOKATRA CO., LTD / WEICHENG METAL VOKATRA CO., LTD
Phone: + 86-574-65273750
Fax: + 86-574-65357828